Wariye Cawil Daahir Salaad oo ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
arlaadi December 22, 2018 No Comments
Wariye Cawil Daahir Salaad oo ka mid ahaa wariyayaasha ka howlgala tvga Universal qaybtiisa Muqdisho ahaana mid ka mid ah wariyaasha ugu caansan geyiga Soomaaliyeed ayaa ka mid noqday dadkii ku geeriyooday mid ka mid ahaa qaraxyo labo ahaa oo saakay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariistee wariye Cawil Daahir Salaad ayaa waxaa la dhintay saddex qof kale oo ka mid ahaa shaqaalaha tvga Universal, waxaana haleelay qaraxa labaad ee ka dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka.
Qaraxa ayaa sidoo kale waxa uu bur bur xoogan u geystay dhismayaal ka ag dhowaa tiyaatarka qaranka ayada oo dadkii ku dhintayna ay gaarayso tiradooda 10 qofood.
Labada qarax oo loo adeegsaday labo gaari oo lagasoo buuxiyay waxyaabaha qarxo ayaa inta la ogyahay waxaa ku dhintay 15 ruux oo ay rayid ku jiraan ayada oo sidoo kale uu ku dhaawacmay Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullahi Tuulax oo ilaaladiisa ay ku dhinteen qaraxii Labaad.
Waxaa sidoo kale uu dhaawac soo gaaray xildhibaan Warsame Joodax oo ay ilaaladiisu ku dhinteen isna. Laamaha amniga ayaa sheegaya inay gacanta ku dhigeen labo qofood oo ka degtay gaariga labaad ee qarxay ayada oo u midkood watay isgaarsiinta gacanta ee ay ciidamada adeegsadaan.